युक्रेनमा शीर्ष चिकित्सा विश्वविद्यालय 2017 - शिक्षा भाइ
“EducationBro” पत्रिका युक्रेनमा चिकित्सा विश्वविद्यालय को र्याङ्किङ्ग तयार. हामी आशा छ कि यो जानकारी सबै भन्दा राम्रो विकल्प चयन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको मदत गर्नेछ युक्रेनमा चिकित्सा अध्ययन. युक्रेनमा mbbs पाठ्यक्रम उच्च गुणस्तर र कम शिक्षण शुल्क छ.
हामी र्याङ्किङ्ग लागि यो विकल्प लागि देखिन्छ (महत्व क्रम घट्दो मा):
शिक्षा को गुणस्तर
विश्वविद्यालय बारेमा विदेशी विद्यार्थीहरूको समीक्षा
विश्वविद्यालय मा विदेशी विद्यार्थीहरूको संख्या
विश्वविद्यालय परिसर र उपकरण मा आधुनिक
शिक्षा को लागत
जहाँ विश्वविद्यालय स्थित छ शहर
वेबसाइट र सामाजिक पृष्ठ को उपलब्धि. आफ्नो अद्यावधिक फ्रिक्वेन्सी.
यहाँ छ शीर्ष 8 युक्रेनमा सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा विश्वविद्यालय:
8. Ternopil राज्य मेडिकल विश्वविद्यालय
Ternopil राज्य मेडिकल विश्वविद्यालय गरे 8 मा राख्न हाम्रो चिकित्सा विश्वविद्यालय को र्याङ्किङ्ग. गत वर्ष जस्तै.
के TSMU मा राम्रो छ? सबै भन्दा पहिले – विदेशी विद्यार्थीहरूले यसलाई प्रेम.
जब हामी दर्जा कम्पाइल, हामी प्रत्येक विश्वविद्यालय केही विद्यार्थी संग कुरा. Ternopil चिकित्सा संस्थान को विद्यार्थीले आफ्नो विश्वविद्यालय बारेमा धेरै सकारात्मक प्रतिक्रिया र तिनीहरू यहाँ अध्ययन मनपर्छ भने. एउटै समयमा, तिनीहरूले आधुनिकीकरण को विश्वविद्यालय आवश्यकता को कलेजहरूलाई को धेरै उल्लेख. बुरा द्वारा तिनीहरूले शहर एक बिट बोरिंग छ कि सम्बन्धित रूपमा, त्यहाँ सानो मनोरञ्जन छ. तर यहाँ सस्तो शिक्षा, जो धेरै विद्यार्थीहरूको लागि महत्त्वपूर्ण छ. हामी Ternopil राज्य मेडिकल विश्वविद्यालय अर्को वर्ष इतिहास स्थिति सुधार हुनेछ भन्ने आशा.
7. डोनेट्स्क राष्ट्रीय चिकित्सा विश्वविद्यालय
डोनेट्स्क राष्ट्रीय चिकित्सा विश्वविद्यालय अब खराब पटक छ. यो नम्बर थियो3गत वर्ष, तर मा पायो मात्र7औँ स्थान 2017. किनभने युक्रेन को पूर्व मा लड को, यसलाई आफ्नो शहर परिवर्तन गर्न बाध्य भएको थियो. यो निश्चित स्तर मा यसको स्थिति मा नकारात्मक प्रभाव छ. यो वास्तवमा लागि छैन भने, हामीले उहाँलाई पहिलो वा दोस्रो स्थानमा दिन लाग्यो होला.
हामी अझै पनि यो विश्वविद्यालय लागि राम्रो समय चाँडै आउनेछ आशा. यो क्षण मा छात्र केही राम्रो विकल्प खोज्न सक्नुहुन्छ.
6. ओडेसा राष्ट्रीय चिकित्सा विश्वविद्यालय
गत वर्ष जस्तै. ODNMU पायो6र्याङ्किङ्ग मा ठाँउ. यसको वेबसाइट र सामाजिक प्रोफाइल लागि कम स्थिति लिन थप एक विश्वविद्यालय. दुर्भाग्यवश यो युक्रेनी विश्वविद्यालयहरु को एक ठूलो समस्या छ.
यो कारक स्तर मा स्थिति मा कम्तिमा प्रभाव छ भन्ने तथ्यलाई बावजुद, यो विश्वविद्यालय माथि उठन सकेन भनेर पर्याप्त थियो6रेखा. पक्कै, पुरानो उपकरण र परिसर, मरम्मत आवश्यकता पनि खराब छ. विश्वविद्यालय ओडेसा को शहर मा स्थित छ, जो देश को मुख्य सहारा र पोर्ट छ. यो विद्यार्थीहरूको मनोरञ्जन को लागि महान अवसर प्रदान गर्दछ, तर यो जीवित लागत मा बुरा प्रभाव छ. विद्यार्थीहरूले’ बारेमा राय ओडेसा राष्ट्रीय चिकित्सा विश्वविद्यालय भिन्न छन्. सबै विद्यार्थीहरू पूर्णतया आफ्नो विश्वविद्यालय सन्तुष्ट छन्.
5. Ivano-Frankivsk राष्ट्रीय चिकित्सा विश्वविद्यालय
नम्बर5फेरि. तिनीहरूले सामाजिक सञ्जाल किन. र विश्वविद्यालय वेबसाइट अद्यावधिक आवश्यक. यो युक्रेनी विश्वविद्यालय को ठूलो संख्या लागि भयानक छ. अब बारेमा Ivano-Frankivsk राष्ट्रीय चिकित्सा विश्वविद्यालय.
सिटी ठूलो छैन. केही विद्यार्थीले आफ्नो विश्वविद्यालयहरु बारेमा खराब राय छ, तर केही यसलाई उत्कृष्ट छ भने. शिक्षालाई गुणस्तर बारे फरक राय छ, तर तिनीहरूलाई धेरै शिक्षा युक्रेनमा अर्को चिकित्सा विश्वविद्यालय मा अधिक महंगा छ कि लाग्छ.
4. Bogomolets राष्ट्रीय चिकित्सा विश्वविद्यालय
यो सबै भन्दा राम्रो विश्वविद्यालय गत वर्ष हाम्रो स्तर मा थियो, तर यो गुमाए3positions. Bogomolets National Medical University is good, तर यो अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको देखि धेरै महंगा र आवश्यक prepaymen छ.
यो युक्रेन को राजधानी मा स्थित छ – कीव. यो विद्यार्थीहरूको लागि शिक्षा उत्कृष्ट गुणस्तर र आधुनिक सुविधाहरु छ. Also it is difficult to study here. त्यसैले, if you going to study medicine in Ukraine and havealot of money, तपाईं चयन गर्न सक्नुहुन्छ Bogomolets राष्ट्रीय चिकित्सा विश्वविद्यालय.
3. Lviv राष्ट्रीय चिकित्सा विश्वविद्यालय
Lviv राष्ट्रीय चिकित्सा विश्वविद्यालय हाम्रो स्तर मा दोस्रो स्थानमा गुलाब. विश्वविद्यालय बारेमा विभिन्न राय बावजुद, सबै विद्यार्थीहरू Lviv को शहर संग धेरै सन्तुष्ट हुनुहुन्छ. EducationBro पत्रिका को स्टाफ आफ्नो कलेजहरूलाई र शिक्षा को गुणस्तर रुचि. यो साँच्चै राम्रो विश्वविद्यालय छ युक्रेनमा चिकित्सा अध्ययन गर्न. हामी विश्वविद्यालय यो वर्ष दोस्रो स्थानको योग्य हुनुहुन्छ भनेर विश्वस्त छन्. कसलाई थाँहा छ, शायद प्रयास को थोडा र अर्को वर्ष मा शीर्ष मा बाहिर आउनेछ? हामी देख्ने.
2. Vinnitsa राष्ट्रीय चिकित्सा विश्वविद्यालय
Vinnitsa राष्ट्रीय चिकित्सा विश्वविद्यालय took 3rd position in our rating this year.
यो विश्वविद्यालय को विद्यार्थी पनि यसलाई राम्रो राय छ. हामी पनि यो विश्वविद्यालय विदेशी विद्यार्थीहरूको बीचमा लोकप्रिय छ भनेर थाहा. तर, हामी VNMU गरिब वेबसाइट छ भनेर याद,हामी सामाजिक सञ्जाल मा यसको आधिकारिक पृष्ठ फेला गर्नुभयो. उनको सम्पर्क पृष्ठ खाली छ thatt र हामी धेरै छक्क फेला गर्दा थिए. हामी आधुनिक संसारमा र हामी हरेक गर्नुपर्छ विश्वविद्यालय शीर्ष सामाजिक सञ्जाल मा पूर्ण पृष्ठ छ लाग्छ. हामी पनि विश्वविद्यालय गरेको उपकरण को ठूलो भाग पुरानो छ र नवीकरण आवश्यक ठान्छन्.
1. Bukovinian राज्य मेडिकल विश्वविद्यालय
यहाँ युक्रेनमा शीर्ष चिकित्सा विश्वविद्यालय छ 2017!
Bukovinian राज्य मेडिकल विश्वविद्यालय युक्रेनमा धेरै प्रसिद्ध र लोकप्रिय छ. यो सानो शहर मा स्थित छ, तर यो शहर यसको आफ्नै आकर्षण छ. हामी साँच्चै आनंद से यो शहर र यसको वातावरण गरेर हैरानी थिए. विश्वविद्यालय पनि अधिक यो प्रभाव reinforces. बस मुख्य भवन हेर्न. हामी पनि शिक्षण शुल्क र शिक्षा को गुणस्तर को मूल्य मनपराएका. सबैभन्दा विद्यार्थी पनि विश्वविद्यालय धेरै राम्रो छ भनेर विश्वास. यस वर्ष Bukovinian राज्य मेडिकल विश्वविद्यालय चिकित्सा पाठ्यक्रम अध्ययन गर्न साँच्चै अचम्मको ठाउँ हो (सामान्य चिकित्सा, दन्त चिकित्सा, फार्मेसी, नर्सिङ) युक्रेन र युरोप मा.
यस वर्ष 1st ठाउँ कम शिक्षण शुल्क र सस्तो जीवित लागत संग विश्वविद्यालय पायो. यसैबीच, यो ठूलो विश्वविद्यालय हो. त्यसैले, हामी साँच्चै विद्यार्थीहरू युक्रेनमा शिक्षाको लागि चिकित्सा विश्वविद्यालय चयन गर्न को लागि यस वर्ष यो धेरै सजिलो हुनेछ भन्ने लाग्छ।. यहाँ तपाईंले प्राप्त हुनेछ उत्कृष्ट चिकित्सा शिक्षा, र आफ्नो विद्यार्थी जीवन उज्ज्वल र हँसिलो हुनेछ.
कसलाई थाँहा छ, शायद कुराहरू अर्को वर्ष मा परिवर्तन हुनेछ! जे भए पनि, युक्रेन अध्ययन चिकित्सा लागि ठूलो ठाउँ छ. यो जीवित र शिक्षण शुल्क यसको लागत संग आकर्षक छ.